राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सांसदको तलब २५ प्रतिशत घटाऔं | Nepal123.com
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सांसदको तलब २५ प्रतिशत घटाऔं
Author: shiva mukhiya Published Date: April 9, 2020 LeaveaComment on राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सांसदको तलब २५ प्रतिशत घटाऔं
२७ चैत, काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले कोरोनाविरुद्ध लड्नका लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सांसदहरुको २५ प्रतिशत तलब कटौती गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । साना कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको तलब काट्न नहुने उनको सुझाव छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री लोहनीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘राष्ट्रपति, संवैधानिक अंगका सबै पदाधिकारीहरु र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलब र भत्ता एक वर्षको २५ प्रतिशत काटियो भने पैसाको कमी हुँदैन ।’
साथै, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम पनि महामारीविरुद्धको अभियानमा लगाउनुपर्ने डा. लोहनीको प्रस्ताव छ । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सांसद् विकास कोषको रकम यतापट्टि लगाउनुपर्छ । सांसद विकास कोषको रकमबाटै ३/४ अर्ब आउँछ ।’
पूर्वअर्थमन्त्री डा. लोहनीले विकास बजेट कसरी परिचालन गर्ने र खाद्यान्नको जोहो कसरी गर्ने भन्नेबारेमा पनि सरकारले सोच्नुपर्ने अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘प्रधानमन्त्री राजनीतिभन्दा माथि उठ्न सक्नुहुन्न’
नेकपा नेतृत्वको सरकारले आफूले दिएका सुझाव अनुसार काम गर्नेमा विश्वस्त नरहेको डा. लोहनीले बताए । नेकपाका नेता, प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिभन्दा माथि उठ्न नसक्ने डा. लोहनीको आरोप छ ।
डा. लोहनीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘य&#2360
← साफ्टा सुविधाका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र तत्काल नचाहिने
Sulav Agrawal of Shanker Group in seven-day police custody →